Wasir Odowaa”waan ku guuleysan doonaa dhismaha maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe – Radio Muqdisho
Wasir Odowaa”waan ku guuleysan doonaa dhismaha maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe
Wasiirka wasaarada arimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa ka hadlay halka uu marayo shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku howlan tahay dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe , islamarkaan ay soo gabagabeyn doonto ka hor inta aysan dhicin doorashada Soomaaliya.
“Wali waan ku howlanahay dhismaha maamulka labada gobol, doowladda Soomaaliyana ahmiyad gaar ah ayey siisay arintaasi, waxaan rajeyneynaa in doorashada kahor uu dhismo maamulkaasi”ayuu yiri wasiirku.
Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa ayaa sheegay in wasaarada arimaha gudaha ay kulan siin doonto siyaasiinta iyo waxgaradka gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe si ay uga wada hadlaan dhismaha maamulka labada gobol.
Shirka Madasha Hoggaamiyeyaasha DFS iyo Dowlad Goboleedyada oo maanta War murtiyeed laga soo saarayo